Maalinta: Diseembar 18, 2017
TUBITAK MAM Project Dhawaaqay Domestic Electric tareenka E-5000-soo-saarka qaranka ee tareen korontada dalka Turkiga marka ay dhamaystirtay in nidaamyada kala jar iyo gacanta loogu talagalay oo soo saaray in ay gaari rail awood ugu mahad. sayniska [More ...]
15 ayaa ku biirtay 22 Milyan Dollar si ay u Qaadato Suuqa Sanadka Sannad
“Miisaaniyadda Sanadeedka 2018 ee Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta waxaa lagu ansixiyay Golaha Qaranka ee Turkiga 17 Diseembar 2017. Khudbadiisa ku saabsan miisaaniyadda wasaaradiisa, Wasiirka UDH Ahmet Arslan wuxuu yiri: [More ...]
Duulimaadyada Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakir
Dawladda Hoose ee Magaalada Diyarbakir, oo sii wadata waxqabadkeeda adeegyo gaadiid oo dadweyne oo aad u sahlan oo raaxo leh, ayaa bilaabay duulimaadyo dheeraad ah oo loogu talagalay muwaadiniinta tagaya ama ka soo degaya garoonka diyaaradaha. Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, muwaadiniinta ayaa kusii raaxeysan, raaxo badan [More ...]
Kardemir: Qofka Ugu Badan Dunida, Deegaanka Bilowga hore
Guddiga Agaasimayaasha ee Kardemir: Iyada oo la kordhinayo saamiga SO2 ee shirkadeena ama dibedda, waxaan bilownay baaritaan ku saabsan dhammaan ilaha suurtagalka ah ee laga yaabo inay ku siiso tallaabo khalkhalgelinta Kardemir. Golaha Agaasimayaasha [More ...]
Shirka Macluumaadka Dadweynaha ee ku saabsan dhismaha Khadka Speed ​​Speed ​​Speed ​​Line
Shirka Kaqaybgalka Dadweynaha ayaa la qaban doonaa si dadweynaha loogu wargaliyo mashruuca iyo in la helo fikradooda iyo talooyinkooda ku saabsan mashruuca su'aal la xiriira dhismaha khadka tareenka xawaaraha sare ee Kayseri-Antalya. Xarunta Gobolka Aksaray, [More ...]
Maalgashiga Maalgashiga Dadweynaha ee Gaadiidka
Turkey, gani doonaa sanadka 85 soo socda billion pounds of maalgashiga dadweynaha. Turkey waxay bilaabeen in ay ogaadaan mashruuc weyn sano ee la soo dhaafay. Mashaariicda la xaqiijiyey waxaa ka mid ah Eurasia Tunnel, Yavuz Sultan Selim Bridge iyo Marmaray. [More ...]
Schwyz-Stoos, oo ah nidaamka ifafaalaha adduunka ugu firfircoon, ayaa la furay Axaddii, markii 53 $ ku kharash garaysay dhismaha Switzerland. Buundada tareenka ee 1738 mitir ee sare ee Buuraha Alpine, mitirka 743 [More ...]
Raiisel wasaare Binali Yildirim X Xisbiga Kirikkale 6. Golaha Deegaanka ee caadiga ayaa hadlay. Yildirim, "Ankara-Kirikkale, Yozgat-Sivas khadka tareenka xawaare sare wuxuu furi doonaa 2019'da." Ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Binali Yildirim, AK Party 6 Kırıkkale. Golaha Deegaanka ee Caadiga ah [More ...]
Koonfur-galbeed ee Faransiiska, bas iskuul iyo tareen isku dhacay ayaa la dilay 6na waa la dilay. Darawalka baska, oo si xun ugu dhaawacmay shilka, ayaa warbixin kooban siiyay xeer ilaaliyaha. [More ...]
Dadka reer Izmir waxay ka falceliyaan socodka gaadiidka
Go'aanka gaadiidleyda 'CHP'li Greater 10' ee sare loogu qaadayo boqolleyda Metropolitan wuxuu soo jiitay jawaab celin weyn. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya inay ku safrayaan weelka xamuulka ee dadweynaha, muwaadiniinta Izmir waxay yiraahdeen, "Chereskeena ayaa sii adkaystay" Golaha Magaalada Caasimadda ee Biyaha [More ...]
Mersin ayaa sugay sannadkii sannadka ee Nidaamka Isgaadhsiinta
Dib-u-dhaca nidaamka tareenka ee dadka Mersin ay muddo sannado ah sugayeen Golaha Deegaanka Dawladda Hoose. Duqa magaalada Kocamaz, dib u dhac ku yimid degmadii degmada ee Mezitli rarida, Duqa Tarhan kubada wuxuu ku tuuray Magaalada Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin 2017 Diseembar [More ...]
RayHaber 18.12.2017 Warbixinta Shirka
Adeeg Cunto ah oo la iibsanayo
Wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa sheegay in dadaalada Madaxweynaha Recep Tayyip Erdo andan iyo Raiisul wasaare Binali Yıldırım ay ahaayeen halka ay waaxdu gaartay sanadkii 15. Raiisel wasaare Binali Yildirim [More ...]
Wasiirka Arimaha Dibadda: Waxaan Xiri Doonaa 2017
Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, sanadka 2017, iyadoo tirada rakaabka gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee 195 milyan oo rakaab ah, ay yiraahdeen tirada rikoorka ayaa la xiri doonaa. Arslan, Golaha guud ee baarlamaanka, miisaaniyadda wasaaradda [More ...]